Kenya: Ma Ogolaan Doonno Alaab Laga Keeno Soomaaliya. – Goobjoog News
Dowladda Kenya aya sheegtay inaysan ogolaan doonin in alaab aan qofkii lahaa la socon la soo geliyo dalka, alaabtaas oo laga keeno dalka Soomaaliya. Hadal kasoo baxay dowladda Kenya ayaa lagu sheegay in alaabtaas lala wareegi doono lana burburin doono iyadoo la raacayo shuruucda duulimaadka.
“Dowladda Kenya ayaa xustay iyadoo ka walaacsan alaab badan oo aan lala socon la soo-saaro duulimaadyada ka yimaada Soomaaliya. Tani waxay ka hor imaaneysaa shuruucda caalamiga ah ee duulimaadyada waxayna keeni kartaa Qatar Amni.” Ayey tiri dowladda Kenya.
“Dowladda Kenya ma ogolaan doonto alaab aysan la socon qofkii lahaa in la keeno dalka. Alaabtaas waa lala wareegi doonaa waana la burburin doonaa iyadoo la eegayo badbaadada duulimaadyada iyo shuruucda amniga diyaaradda soo qaaddana waa lala xisaabtami doonaa.”
Islamarkaana, dowladdu waxay ku adkeysaneysaa inaan sarkaal Soomaali ah oo aan wadan sharci iyo dal-ku-gal loo ogolaan doonin inuu Kenya gudaha u soo galo. Sida ay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda, afartii muwaaddin ee Soomaaliyeed kuwaasoo loo diiday dal-ku-galka bishan May 20, 2019 ay ku socdaalayeen baasaboorro diblomaasi ah laakiin aysan wadan dal-ku-dal. (Visas)
Kenya waxay sidoo kale yareysatay hadal dhawaan kasoo baxay dowladda Soomaaliya kaasoo ahaa in mas’uuliyiinta Soomaaliya aysan ka qeybgali doonin shirarka caalamiga ah iyo kuwa heer gobol ee ka dhaca magaalada Nairobi.
“Dowladda Kenya waxay sii wadi doontaa inay fududeyso oo ay martigeliso kulamada caalamiga ah iyo kuwa heer gobol iyadoo raaceysa shuruucda caalamiga ah, muwaaddiniinta Soomaaliyeedna markasta la soo dhaweynayo haddii ay raacaan shuruucda dal-ku-galka sida ay sameeyeen dhammaan ajaanibta kale.” Ayey tiri Wasaaradda Arrimaha Dibadda.
Soomaaliya iyo Kenya ayaa ku muransan xudduud badeed dacwaddiiso ay hortaal maxkamada caddaaladda ee caalamiga ah taasoo la filayo inay go’aan ka gaari doonto.